DJI Phantom 4: teknụzụ na atụnyere njirimara | Akụrụngwa n'efu
DJI Phantom 4: njirimara ọrụ na njirimara
DJI bụ ụlọ ọrụ teknụzụ ndị China mara amara na nke ọma. A raara ya nye n'icheputa na imepụta drones maka foto nke ikuku. Ọdịmma ya magburu onwe ya na njirimara nke ụdị drone ọ bụla emeela ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị achọ na nke ọma na ahịa. Ọ bụghị naanị na ha bụ ndị isi ire ere, ha bụkwa ndị a na-ejikarị maka telivishọn, ọrụ egwu, ụlọ ọrụ ihe nkiri maka eserese, wdg.
Ugbu a ọ na - anọchite anya 70% nke ahịa ahịa mmiri, ọ ga - adịkwa elu karịa ma ọ bụrụ na ị nụchaa naanị ahịa ọkachamara. N'ezie, DJI meriri 2017 Emmy Teknụzụ & Injinia maka teknụzụ ya maka igwefoto nke drones. Ma ọ bụrụ na e nwere ụdị mmiri na-adịghị mma, nke ahụ bụ usoro Phantom.
1 Kedu ihe m nwere ike iji ya mee na gịnị ka m enweghị ike iji ya mee?
1.1 Achọrọ m ịzụta ọkachamara n'ụgbọ mmiri?
2 Esemokwu dị iche na ụdị DJI ndị ọzọ
3 Ihe omuma nke 4 nke ihe omuma
3.4 Phantom 4 nke di elu
4 Mmezi nke DJI Phantom 3
4.1 Ọdịnihu DJI Phantom 5
Kedu ihe m nwere ike iji ya mee na gịnị ka m enweghị ike iji ya mee?
DJI drones bụ karịsịa Ezubere iji rụọ ọrụ ndekọ na / ma ọ bụ ijide ihe oyiyi. Ha abụghị ụdị aerodynamic na fechaa maka ịgba ọsọ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọduọ drone, DJI abụghị nhọrọ kachasị mma. Mana nkwụsi ike ya na njirimara ya mere ka ọ zuo oke maka ndị na-amakarị na ndị ọkachamara ka ha gbaa vidiyo ma were foto ikuku. Maka nke ahụ, ọ bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mma ị nwere ike ịchọta.
Mgbe ụfọdụ, m na-jụrụ bụ ọ bụrụ na i nwere ike ibuli ibu, iji maatụ, iburu ngwa nnapụta ma ọ bụ ihe onyogho na ebe anaghị erute nnapụta, wdg. Nke bụ eziokwu bụ na Phantom quadcopter nwere ike ibuli narị ole na ole gram, mana ha anaghị ebu ibu karịa nkwado na foto ha na-ebu. Ọ bụrụ na ị wepụ ya, ịnwere ike ibudata ihe ọzọ ... Ihe doro anya bụ na e nwere DJI S900 (ma ọ bụ usoro mmepụta ihe) yana ndị na-akwado 6 nwere ike iburu kilogram 5, ọnụ ọgụgụ buru ibu.
Mmechi, ọ bụrụ na ịchọrọ ka mmiri dị mma ma ọ bụ were ezigbo onyonyo, DJI bụ ezigbo nhọrọ. Maka ịgba ọsọ na ebumnuche ndị ọzọ, ị kwesịrị iche echiche gbasara ịhụ ụdị ndị ọzọ...
Achọrọ m ịzụta ọkachamara n'ụgbọ mmiri?
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido i nwebeghị otu, azịza ya bụ mba. Kwesịrị ịmalite site na ọnụ ala dị ọnụ ala iji mee ya. Ma ị na-a seasoned hobbyist ma ọ bụ ọkachamara, obi abụọ adịghị na DJI nwere nke kacha mma ngwaahịa maka gị.
Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ị ga-ajụkwa onwe gị ụdị DJI ma ọ bụ ihe nlereanya ịchọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ga-ejide ihe oyiyi na vidiyo na Phantom, ị nwere ike idozi maka DJI Phantom 3 Pro ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ntụrụndụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ọzọ, gaa ozugbo maka otu nsụgharị DJI Phantom 4.
Esemokwu dị iche na ụdị DJI ndị ọzọ
DJI nwere ọtụtụ ụdị maka mejuo mkpa di iche iche nke ndi oru ya. Mostdị ndị a ma ama bụ:
DJI esi: maka onye ọ bụla na-achọ mmiri dị mfe ma dị mfe. Nhọrọ dị mma maka ndị na-amu amu. Ha dị ọnụ ala ma ghara ibu oke, mana ogo na teknụzụ ka dị mma. Ma atụla anya uru ma ọ bụ teknụzụ nke ụdị ndị ọzọ dị elu nwere ...
DJI Mavic: ha okpukpu abụọ na ọnụ ahịa na Spark, ya mere na ha abụghị ọnụ ala drones. Isiokwu a bụ nnọọ ihe na-ewu ewu na Fans nke efe n'elu na vidiyo. Ọ nwere ọkaibe imewe na ọgụgụ isi ụgbọ elu ụdịdị, na ezi obodo, ọsọ, kwụsie ike na ezi nkịtị. E nwere ọtụtụ mbipụta nke ụgbọ mmiri a, dịka Air, Pro, Platinum, wdg.
Ihe Nhazi DJI: Ọ bụ eze nke quadcopter siri ike. Ọ dị mma iburu igwefoto dị elu na nkwụsị ya iji were ihe oyiyi kachasị mma ma dekọọ vidiyo dị elu. Ọnụahịa ya dị elu, mana ọ bara uru ego iji nweta nsonaazụ kacha mma. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ọkacha mmasị maka ndị ọkachamara na-ese onyinyo. Ka ọ dị ugbu a, ha na-aga maka ụdị nke anọ, ma dịka nke gara aga, enwere ụdị dị iche iche dịka nke nkịtị na Pro na Pro Plus, nke dị ntakịrị ọnụ, mana yana mgbakwunye.
DJI na -akwalite: usoro ọzọ nke drones na 4 moto na nnukwu ike na agility iji mee ndekọ kachasị mma na ngagharị. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ihe nkiri nkiri, soro ndị mmadụ na-agbagharị, ụgbọ ala, wdg.
DJI Ugogbe anya: ọnụahịa ya dị ntakịrị karịa Spark, ma ọ dị ọnụ ala karịa Phantom na Mavic. Ihe nlere a kachasị mma iji ya na enyo anya FPV, emebere iji nwee ahụmịhe ụgbọ elu zuru oke. Mmegharị isi gị ga-agbanwe nghazi igwefoto ka ị wee hụ ihe niile n'oge ụgbọ elu ahụ. Site n'ụzọ, nke ahụ apụtaghị na ndị gara aga adịghị adaba na FPV, naanị na nke a ka mma na teknụzụ a.
DJI Ọrụ: ọ bụ usoro pụrụ iche maka ojiji a kapịrị ọnụ. Ha nwere ike ibuli elu karịa n'ihi na ha na-enwekarị 8 rotors kama nke ahụkarị 4. A na-eji ha eme ihe na ụlọ ọrụ ugbo.
Nwere ike ịzụta ma tulee ụdị ndị a na Ilọ ahịa gọọmentị DJI n’asụsụ Spanish. Also ga-ahụkwa ọtụtụ ngwa (nkwado, igwefoto, ...) maka usoro niile.
Ugbu a na ị maara atụmatụ nke ụdị DJIKa anyi soro ndi Phantom 4 gaa, otu n’ime ihe eji eme okpu eze ...
Ihe omuma nke 4 nke ihe omuma
El Ikpeazụ isonyere usoro a bụ Phantom 4, nwere nnukwu mmụba na ụdị ndị gara aga. Njirimara teknụzụ nke mmiri a dị oke mma.
Ọ bụ nke kachasị na usoro Phantom 4, na ezigbo arụmọrụ na njirimara teknụzụ nke m kọwara ebe a:
Ibu ibu: 1380 g
Ascent ọsọ: ruo 6m / s (na-adabere ofufe mode)
Oke ọsọ ọsọ: ruo 72 km / h (dabere na ọnọdụ ofufe)
Oke nchepụta kachasị: ruo 42º (dabere na ọnọdụ ofufe)
Oke angular ọsọ: ruo 250º / s (dabere na ọnọdụ ofufe)
Oke kachasị elu: 5000m
Oke ikuku na-eguzogide: 10m / s
Ndụ batrị: 28 min ihe ruru. na 5350mAh Li-Po batrị na chaja gụnyere
Ọnọdụ okpomọkụ dị na-arụ ọrụ: 0-40ºC
Nhazi usoro: GPS + GLONASS
Kwụsị: 3 axes
Igwefoto: oghere MPOS 12.4 MP f / 2.8, yana nkwado maka HDR na UHD (4K)
Kaadi ebe nchekwa: akwado microSD rue 64 GB UHS-1 klas
Ime akara ugboro ole: 2.4 Ghz (nke dịpụrụ adịpụ na nkwado maka ngwaọrụ mkpanaka) Lightbridge dị elu
Usoro nchọpụta ihe mgbochi: ụzọ 5 nwere ihe ntanetị atọ (n'ihu, azụ, n'okpuru na n'akụkụ)
Ekwentị mkpanaka maka ntaneti onyonyo: DJI GO 4 maka iOS na gam akporo (nke nwere nkwụsị 220ms)
Ahịa: ihe ruru. € 1100
La DJI Phantom 4 Pro mbipute ọ bụ ihe ka mma version gbasara isi, na ụfọdụ mgbakwunye. Na-agụnye ihe niile dị n'elu:
Anya ma ọ bụ elu kacha elu: 6900 m
Ndụ batrị: 30 min ihe ruru.
Ibu ibu: 1400 g
Igwefoto Igwefoto: CMOS 20MP
Mgbanwe ndị a na-anọchi anya a ịrị elu ọnụahịa nke ihe dị ka € 500, nke ahụ bụ, ọ ga-enwe a atụmatụ ego nke € 1600.
La DJI Phantom 4 Pro Plus mbipute Ọ bụ mmelite karịa na mbipute Pro, yana ọnụahịa dị ntakịrị karịa nke gara aga. Mgbanwe ndị ahụ, gụnyere ihe niile bụ isi Phantom 4 ga-enwekwa, bụ:
Ogwe njikwa: tinyere ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa, na-ewepụ mkpa ọ dị iji ngwaọrụ mkpanaka
Oge nchịkwa redio: ịnwere ike iji 2.4 na 5.8 Ghz belata nnyonye anya
Phantom 4 nke di elu
El DJI Phantom 4 Nke dị elu Ọ dịtụ iche na Pro. Ọ na-ekenye ọtụtụ atụmatụ na Phantom 4, doro anya, mana yana atụmatụ ndị a na-egosi ọdịiche dị na ya na Pro:
Usoro nchọpụta ihe mgbochi: Naanị ihe nwere ihe mgbochi ihe mgbochi si n'ihu na n'okpuru, mana ọ na-ewepụ ihe mmetụta ndị ọzọ na azụ na n'akụkụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịnweghị ịchịkwa ya nke ọma, ọ nwere ike ịdaba n'akụkụ na mgbochi azụ ... Nke ahụ bụ, ọ na-eji nwayọ dị ala karịa nke a na Pro.
Ibu ibu: 20g Mkpa ọkụ
Ya mere, ọ bụ otu nhọrọ gbakwasara nye ndị ọkachamara kachasị nakwa na ha maara otú e si achọpụta ihe ndị a nke ọma. Kama, ọnụahịa dị n'etiti isi Phantom 4 na Pro, ya bụ, adịghị ọnụ dịka Pro ma ọ bụ Pro Plus.
Ọ bụrụ na anyị ewere ọganihu dị ka ntụnye aka, ndị DJI Phantom 4 Advanced Plus nwere naanị ọnụahịa nke ihe dị ka € 100 dị elu. The atụmatụ ndị fọrọ nke nta yiri. Naanị ihe dị iche bụ:
Ime akara: na 5.5 ″ ihuenyo gụnyere
Dị ka ọ dị na Pro + ma e jiri ya tụnyere Pro.
Mmezi nke DJI Phantom 3
Ọ bụrụ na ị na-eche otú DJI Phantom 4 vs. Phantom 3, Ọ bụ nnọọ ihe dị mfe ịkọwa. Ọ bụrụ na anyị jiri 3kpụrụ Phantom 4 tụnyere Phantom XNUMX base anyị nwere ihe ndị a:
Ogo: 1000m na ​​nke 5000m
Nnwere onwe: 23 min vs 28 min
Arọ: 768g vs 1380g
Ihe mmetụta Igwefoto: 12MP FullHD CMOS vs 12MP 4K CMOS
Njikọ: WiFi na Lightbridge Enwetara Agbanye (karịa x4 ọsọ na WiFi)
Nhazi ala: GPS na GPS + GLONASS
Ahịa: ihe ruru. 728 vs ihe ruru. € 1100
N'ezie teknụzụ na ụzọ ịkwọ ụgbọ ala emeela ka ọ dị mma. Na nkenke, e mezuola ya a elu àgwà drone na uru, ọ bụ ezie na ọ nwekwara oke ibu ibu. N’ezie, enwekwara ọtụtụ mbipụta nke Phantom 3, dị ka Pro na Ọganihu. Ọ bụrụ na anyị jiri atụmatụ nke Phantom 3 Pro tụnyere ha, ha yitụrụ ka ebe Phantom 4 malitere, ya bụ, ihe dị ka 5000m pụọ na igwefoto 12MP nwere ikike 4K.
N'ihi nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nlereanya yiri isi Phantom 4, mana na ọnụahịa dị ọnụ ala, ị nwere ike zụta Phantom 3 nke nwere obere ego ka ọ bụ okenye. Naanị ihe dị ntakịrị ala bụ njikọta n'etiti drone na njikwa, nke emelitere nke ọma na 4.
Ọdịnihu DJI Phantom 5
Ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya ọdịnihu DJI Phantom 5 Ọ bụ drone nwere mmụba dị ukwuu na 4. Ọ bụ ezie na Phantom 4 na-anọchite ugbu a elu nke usoro DJI, ọ gaghị ewe oge maka ọgbọ ọzọ ịbịa. Ọ bụrụ na anyị nyochaa mmezi nke 4 gbasara 3, anyị nwere ike ịtụ anya ka mmiri nwee nsogbu n'ọtụtụ isi:
Onwe ya- DJI Phantom 5 nwere ike ịdị ike karịa 4, mana nso ya nwekwara ike ịka mma. Ikekwe n'ime nkeji ole na ole ọ ga-agafe ọkara awa dị ugbu a nke ha na-adịkarị.
Njikọ: Enwere ike inwe ndozi na teknụzụ Lightbridge, ebe ọ bụrụ na akụkụ ọhụụ ahụ ka mma, njikọ ka mma ga-adịkwa mkpa iji zere igbu oge na na bandwidth ahụ dị elu.
Bịa: Ma eleghị anya, ihe ọhụrụ Phantom 5 ga-agbaji ihe mgbochi 7000m.
Igwefoto- Igwefoto ahụ ga - abụ otu n’ime ihe ga - agbanwe nke kachasị, ikekwe site na ọnụego FPS dị elu maka 4K na ọbụnadị ikike ijide 8K.
Enwere m olileanya na m nwere gị enyere aka n'ịhọrọ drone ma kpochapụ obi abụọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » DJI Phantom 4: njirimara ọrụ na njirimara
NRF24L01: modul maka nkwukọrịta ikuku maka Arduino
RJ45: ihe niile gbasara njikọ netwọk